တရုတ်အဆင့်မြင့်သံတမန်က အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနှင့် တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလံ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအလံအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် ယန်ကျဲ့ချီသည် တောင်းဆိုချက်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိတ်ဆူလီဗန် (Jake Sullivan) နှင့် မေ ၁၈ ရက်တွင် တယ်လီဖုန်း လက်ခံပြောဆိုဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
CPC ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မရှင်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးလည်း ဖြစ်သူ ယန်ကျဲ့ချီက တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး နှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် တို့အကြား ရရှိခဲ့သည့် အရေးပါသော သဘောတူညီချက်များအား နှစ်နိုင်ငံက အလေးအနက်အကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်ဘက်လုံးသည် စစ်တပ်အချင်းချင်း ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး စသည့်နယ်ပယ်များတွင် ဆွေးနွေးမှုတစ်ချို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ အကျိုးရှိပြီး ဆွေးနွေးမှုအရှိန်အဟုန်အား ထိန်းသိမ်းထားသင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် မှားယွင်းသောပြောဆိုချက်များ နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၊ ယင်းအား တရုတ်နိုင်ငံက ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာ တုံ့ပြန်ကာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထောက်ပြသွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ယန်ကျဲ့ချီက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပြောဆိုသော အသုံးအနှုန်းများ နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကိုက်ညီသင့်ကြောင်း ၊ ၎င်းတို့၏ ကတိကဝတ်များအား ခိုင်မာသည့် မူဝါဒများ နှင့် လုပ်ရပ်များအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ပူးပေါင်းသင့်ပြီး နှစ်ဘက်အကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများအား မှန်မှန်ကန်ကန်စီမံခန့်ခွဲသင့်ကြောင်း နှင့် ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံသောစိတ်ချရသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းမှန်သို့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သည့်အကြောင်းအရာများအား လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်မေးခွန်းသည် တရုတ်-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတွင် အရေးကြီးဆုံး ၊ သတိထားရဆုံး ၊ အဓိကအချက်အချာအဖြစ်ဆုံး မေးခွန်းဖြစ်ကြောင်း ယန်ကျဲ့ချီက အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဘက်က တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်း မူဝါဒအား လိုက်နာပြီး ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကို မထောက်ခံကြောင်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ထိုင်ဝမ်ပုစ္ဆာအပေါ် လတ်တလော အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လုပ်ရပ်များ နှင့် ကြေညာချက်များမှာ အတော်အတန်ကွဲပြားကြောင်း ယန်ကျဲ့ချီက ပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ အမေရိကန်ဘက်က ထိုင်ဝမ်ကတ်ကို ဆက်လက်ကစားနေမည်ဆိုပါက မှားယွင်းသည့်လမ်းကို ပို၍ဆင်းသက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်၊ အခြေအနေမှာ ဆိုးရွားသည့်အန္တရာယ်ထဲသို့ ဧကန်မုချဆိုက်ရောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အခြေအနေအား နားလည်သဘောပေါက်ရန် ၊ ၎င်းတို့၏ ကတိကဝတ်များအား တစ်သဝေမတိမ်း လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန် နှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်း မူဝါဒ နှင့် တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲ ကြေညာချက် သုံးရပ်၏ သတ်မှတ်ချက်များအား လိုက်နာရန် တရုတ်နိုင်ငံက တိုက်တွန်းကြောင်း ယန်ကျဲ့ချီက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်ဘက်က အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်မှု နှင့် လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် ခိုင်မာသည့်လုပ်ရပ်များအား လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏ ကတိကဝတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ကို အမေရိကန်ဘက် မှတ်သားထားနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အား ကြိုးပမ်းခြင်းသည် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ယျေဘုယျလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်အပြင် ပြည်သူများ၏ ဘုံရည်မှန်းချက်လည်း ဖြစ်ကြောင်း ယန်ကျဲ့ချီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ချစ်ကြည်မှု ၊ ရိုးသားမှု ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးအမြတ် နှင့် အားလုံးပါဝင်မှု အခြေခံသဘောတရားအား ထိန်းသိမ်းကာ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးအမြတ် နှင့် win-win ရလဒ်များအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့်အပြင် ၎င်းတို့နှင့် တူညီသောကံကြမ္မာကို မျှဝေနေကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောအကျိုးစီးပွားအတွက် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ အခြေခံ နှင့် ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအား လျော့ပါးစေသည့် မည်သို့သော လုပ်ရပ်မျိုးမဆိုသည် မည်သည့်အခါမျှလက်တွေ့မကျနိုင်ဘဲ ပျက်စီးကိန်းကြုံရကြောင်း ၊ ခွဲထွက်ရေးဝါဒီထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှုအတွင်း ဂိုဏ်းကွဲမှု နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်စေရန် မည်သို့သော ကြိုးပမ်းမှုမျိုးမဆိုသည် အရေးနိမ့်ကာ ပျက်စီးကိန်းကြုံရမည်ကြောင်း ယန်ကျဲ့ချီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယန်ကျဲ့ချီ နှင့် ဂျိတ်ဆူလီဗန်တို့သည် ယူကရိန်းအရေး ၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် အခြေအနေ နှင့် တစ်ခြား နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသတွင်း ကိစ္စရပ်အချို့အပေါ် အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 18 (Xinhua) — Yang Jiechi,amember of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, on Wednesday heldaphone conversation with U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at the latter’s request.
Photo – Photo taken on Sept. 24, 2015 shows the national flags of China (R) and the United States as well as the flag of Washington D.C. on the Constitution Avenue in Washington, capital of the United States. (Xinhua/Bao Dandan)